ဂေဇက်မှ…အဖြေထွက်တာက..(^^) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂေဇက်မှ…အဖြေထွက်တာက..(^^)
Posted by thit min on Oct 2, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
ဒါနဲ့ဟာသတွေဖတ်၊ ပြန်ရေး၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဘာတွေပြန်ရေးနဲ့ကိုယ်ဟာကိုပြန်သွေးရတာပေါ့ဗျာ။
မန်းဂေဇက်လိုရေးစရာတနေရာရှိတာကတော့၊ ရေငတ်နေသူရေသန့်စက်ရုံပိုင်လိုက်သလိုပါပဲ၊ တော်တော်ကျေးဇူးကြီးတဲ့ဦးခိုင်ဗျ။ ကျနော်ဒီလိုပဲရိုးရိုးသားသားမြင်တယ်။
အစဉ်အလာမပျက်ဂေဇက်ကိုလဲဖတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ ခုတလော အပူဝေ့ဗ်(အပူလှိုင်း)တွေအများစုတွေ့နေသလိုပဲဗျာ။ ဧရာဝတီကလဲပူစရာကိုးဗျနော်။
ထိုင်းနယ်စပ်ကကလေးမလေးများကလဲ သနားစရာတော်တော်ကောင်းတာမဟုတ်လား။ တခုခုထလုပ်ပေးချင်စိတ်ပေါက်သွားအောင်ကိုသနားစရာပါ။
ဘာသာရေးငြင်းခုံပွဲလဲရှိပါသေးတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဆိုတော့ အထိမခံနိုင်ကြတာသဘာဝကိုး။ ကောင်းပါတယ်။ ငြင်းတဲ့အထဲကဗဟုသုတတွေ တလှေကြီးရတယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ဘာသာရေးပြောနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့သစ်မင်း တောင်”သေး” သွားတယ်။
နောက်တခုကတော့ဟိုပုံဒီပုံတွေနဲ့ပို့စ်တွေပါ။ ဆယ်လစ်ဘရစ်တီ ဝက်ဆိုက်တွေမှာမြင်နေကြတဲ့ပုံဟောင်း သစ်တွေစာစောင်မျက်နှာဖုံးတွေ အွန်လိုင်းကဟိုနားဒီနားက ပုံတွေကိုဒီမှာလာ၊ တင်တာများတယ်လို့ထင်ပါရဲ့။ မန်းဂေဇက်အဖွဲ့သားများကလဲ အားပေးကြပါတယ်ဗျာ။
အဲဒီအရင်တရက်ကဦးစွာ တင်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းပို့စ်မှာကော်မန့်တခုမှမရသေးခင်၊ အဲဒီဓာတ်ပုံပို့စ်မှာကော်မန့်၁၅ခုကျော်သွားပါလားမင်းကြီးများ(^^;)….
ဟောလာပါပြီနောက်တခုတီရှပ်နဲ့ဘိုသီဖတ်သီစတိုင်နဲ့ပဲ ပတ်စ်စပို့ကိုဖတ်ကနဲကောင်တာပေါ်ပြစ်တင်ပီး, အနောက်ကကောင်တွေနိုင်ငံတကာ အဲပိုတ်တွေမှာ အင်မီဂရေးရှင်းကိုခပ်မှန်မှန်ဆက်ဆံနေချိန်မှာအနီရောင်စာအုပ်ကိုင်မြန်မာ များကတော့ရီလဲပြရ စစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေကိုလဲ သီးခံရသေးဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ”ဂျပန်မတယောက်ကိုမုဒိမ်းကျင့်သတဲ့၊ သတ်သတဲ့”။
ဂျပန်အစိုးရဆိုတာမြန်မာအစိုးရအဆက်ဆက်ကိုေ ထာက်ခံခဲ့တာနော်။ ဘယ်သူမှဘာအကူညီမှမပေးချိန်မှာတောင်သူရဲ့ပုံမှန်ထောက်ပန့်ကြေးဒေါ်လာတသန်းကို မပျက်မကွက်ပေးနေခဲ့တာ။ ဒါကတပိုင်း။
နောက်တခုကလူသတ်ပြီး ပစ္စည်းယူတာဆိုနားထောင်လို့ရသေးတယ်။ မိုက်တာကမိုက်လို့ရတယ်။
အမှုတခုဆိုရင်အင်တာနက်မှာသိကြ၊ ပိုက်ဆံချေး၊ ပြန်မပေးနိုင်တော့အဲဒီအကြွေးရှင်ကောင်မလေးကိုယောက်ျားကြီးသုံးယောက်က ပန်းခြံမှာချိန်း၊ ဒါးနဲ့လည်ပင်းကိုလှီးတယ်။ ဒါး က”ယန်း ၁၀၀” ဆိုင်ကဝယ်လာတာဆိုတော့လှီးလို့မပြတ်ဘူး၊
ဒါနဲ့ကားနောက်ခန်းမှာပါတဲ့ ၁၀ ပေါင် တူနဲ့အဲဒီအမျိုးသမီးခေါင်းကိုထုသတ်သတဲ့။ ဆက်ပြောရင် “လေ” သွားမယ်။ တော်ပြီ။ သူအရပ်နဲ့သူ့ဇာတ်၊ ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။
ဒါပေမဲ့သူများနိုင်ငံမှာဒီလိုသတ်တာမတရားကျင့်တာမပြောနဲ့ သဘာဝဘေး(ထိုင်းဆူနာမီ၊ အင်ဒိုနီးရှားဆူနာမီ)နဲ့သေတဲ့အထဲ သူတို့လူမျိုးပါရင် အနည်းဆုံးတပတ်သတင်းမှာပါမယ်။ ခုလဲတူတူပဲ။ ခဏခဏပြောနေပြီ။ ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလဲပါ၊ ပါတယ်။ ၁၉၉၀မှာထိုင်ဝမ်၊ ၂၀၀၂ ခုနစ်မှာ New Caledonia(Southwest Pacific Ocean)၊ ၂၀၀၇ မှာထိုင်း၊ ခုမြန်မာမှာ၊ မိန်းကလေးတယောက်တည်းခရီးသွားလို့အသတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါဆိုရင်နောင်များ အလားတူကေ့စ်မျိုးပေါ်လာရင်ပြန်ပေါ်လာအုန်းမှာပေါ့ “မြန်မာ၊ မြန်မာ”လို့။ အသိဂျပန်တွေနဲ့တွေ့ရင်လဲပြောကြ၊ မေးကြအုန်းမှာ။ ဒါကိုလဲအပူလှိုင်းတခုလို့ပဲဆိုပါရစေတော့။
အဲ..နောက်တခုကတရုတ်ကအနိုင်ကျင့်နေဘီတဲ့။ ဒါလဲတော်တော်ပူစရာကောင်းတာပါပဲ။ ပူပင်ရမဲ့ကိတ်စဘဲဗျ။
နောက်ဆုံးတခုကတော့ကိုအငြင်းပွါးခြင်း၊ ကတောက်ကဆဖြစ်ခြင်း၊ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ကြခြင်းနဲ့ဆဲတာ၊ ဆဲတာထက်ဆိုးသောစကားလုံးများပေါ့ဗျာ။ အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကို ထေ့လုံးငေါ့လုံးတွေဝေဆာလှတဲ့ကော်မန့်တွေဖတ်ရတော့အပေါ်က အပူတွေခဏမေ့သွားတယ်။
မိုက်တီးရဲ့ရိုက်ချက်၊ ကျောဇောလင်းရဲ့အတွေးပုံရိပ်၊ မောင်မျိုးမင်းရဲ့ရင်တွင်းဖြစ်ဆိုတာတွေ”အကိုင်းကြီးကြီးမှာနား”လိုက်လို့ရတယ်။
ငြင်းတုန်းခုံတုန်းတော့စိတ်ဆိုးကြမယ်ထင်ပါရဲ့၊ နောက်တော့လဲ(လူကြီးလူကောင်းဆန်စွာ) ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြပုံရပါတယ်။ ဒီလူတွေပဲ၊ ပြန်ပြီးဆွေးနွေးကြပြန်ပေါ့။
ကိုပေါက်ကအတွေးအခေါ်ပါတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတင်ပြီး၊ အတွေးအခေါ်ကောင်းကောင်းလေးတွေလဲ မက်ဆိတ်ခ်ျပေးတတ်တဲ့ ထူးခြားသူတယောက်ပါပဲ။
ဗဟုသုတနဲ့အတွေးအခေါ်တိုးစေတာမျိုး၊ ငြင်းရခုံရဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်ရတဲ့နေရာမျိုးပုံစံတူဝတ်ဆိုက်ရှိမယ်ဆိုရင်တောင်၊ မန်းဂေဇတ်ရဲ့သူကြီး(ဝက်ဆိုက်ပိုင်ရှင်) လိုပြောချင်သလိုပြော၊ နှုတ်ချင်သလိုနှုတ်၊ (ဆဲတဲ့လူလဲဆဲသဗျနော့)၊ ဝေဖန်ချင်သလိုဝေဖန်ခံနိုင်တဲ့နေရာတော့ ရှား
အစ်ကိုသစ်မင်းရေ… တစ်ခါတလေ အမြင်တွေကို မမြင်ယောင်ဆောင်နေရတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ တစ်ခါတလေ မနောတစ်ယောက်ထဲ ဘုဂလန့်ထင်မိတာ သဂျီးကလည်း ဘုဂလန့်ရှင့်။ သူပြောချင်ရင် လွှတ်ပြော မပြောချင်လည်း ရေခဲတုံးဖင်ခုထိုင်နေသလားမှတ်ရနဲ့…. ရေးချင်တာရေးခွင့်ပေးထားတယ်လည်းဆိုသေးတယ်… ဒီလိုရေးတယ် ဟိုလိုရေးတယ် ပြောချင်တဲ့အခါလည်းပြောပေါ့။ ဒါပေမယ့် မနေနိုင်တော့လည်း ပြောချင်ရာ ပြော ရေးချင်စိတ်ရှိရင်လည်း ရွာထဲရောက်လာရတာပေါ့ရှင်။
ဪ…..နှမငယ်ရယ် အဲဒါတွေက ရှိ ပေ မပေါ့ ကွာ။
မှန်ပါသကိုး မောင်ကြီးရယ်… ရွာပြင် မောင်းထုတ်ချင်ပေမယ့်လည်း ရေခပ်က မထွက်ဖြစ်တာကိုးရှင့်…. နှမငယ်တို့ကတော့ ရွာအ၀င်ဝ ထန်းတောက ထန်းရေမူးတွေရန်ကလည်း ရှိသေးတယ်ရှင်…
thit min ရေ။
ဂဇက် ရဲ့ လက်ရှိ ပုံရိပ်တွေကို တစ်ကွက်ခြင်းရိုက်ပြသွားတာ ကျေးဇူးပါ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က Negative Image ဖြစ်နေပြီလားဆိုတာလည်း Review ပြန်ပြန်လုပ်ကြည့်နေပါတယ်။
အခုလိုမျိုး ဂဇက်ရဲ့ လက်ရှိ ပုံရိပ်လေးတွေကို တစ်လတစ်ခါလောက် ရေးပြမယ်ဆိုရင်
ရွာထဲမှာ သူခိုးအကြီးစား တစ်ယောက် ရှိတယ်လို့ 
windtalker ရဲ့ပို့ စ်တွေ မှာ ဖတ်ဖူးတယ် ခင်ဗျ
ကိုသစ်မင်းရေ သေချာ လေ့လာကြည့်ပါဦးလို့ 
အမလေး ကယ်တော်မူကြပါ သူခိုးအကြီးစား တစ်ဂယ်ရှိတယ်တဲ့လား၊
မဖြစ်ချေဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလေးတွေ သေချာ သိမ်းထားဦးမှ…။
နောက်တော့ အသားကျ သွားပါလိမ့်မယ်
ဒီအပူတွေ နဲ့ 
ှုယာကူဇာဂိုဏ်းချုပ် ကိုသစ်မင်းပြောသလိုပါပဲ သဂျီးက စီအိုင်အေသူလျှို၊ နအဖစစ်တပ် သတင်းပေး၊ တရုတ်ကူမြူနစ်ကေဒါ စမူဆာ သုံးဖက်ချွန် ဖြစ်ပါတယ်။ :mad:
ဒီလို Review လေးရေးပေးလိုက်တော့လဲ..
ထန်းတော က ဖြင်. သာသာယာယာ ကြက်ကြော် ကြွက်ကြော်စုံသမို. မလာရင်လည်း မနေနိုင်
သောက်ပါများ လေထလို. မူးဝေလို. လျှောက်ကာပြောပါရင် ရွာသူကြီးများ ခွင်.လွတ်တော်မူကုန်…:P
ကိုသစ်မင်းရေ..အကုန်မဖတ်နိုင်သေးတာ…ကိုသစ်မင်းဘလော့ နဲ့ ဘဲကျေနပ်လိုက်တော့မယ်
တကယ့် Creative Writing ပါ။ ဒီလို ရေးဖို့ စိတ်ကူးလေးကောင်းလိုက်တာ။
ဒီဆိုဒ်မျိုး ပုံစံတူရှိရင် တောင် သူကြီးရဲဆိုဒ်ကို မှီမှာမဟုတ်ဘူး
ရွာသားတွေလဲ ရန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ ပျော်ဘို့ကောင်းပါတယ်
တစ်ခုပဲရှိတယ် ရွာထဲ ရန်ဖြစ်နေတုန်း မယောင်မလည်ရောက်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့
ကျွန်မ တခြားဆိုက်တွေကို သွားလည်ဖူးတယ် … ပိုစ့်တစ်ပုဒ်တင်လိုက်ပြီး တက်လာတဲ့ ကော့မန့်တွေက အပေါ်ယံလောက်ပဲ .. ဖတ်သွားပါတယ်တို့ … ကောင်းပါတယ်တို့လောက်ပဲ … ဒီဆိုက်မှာလို နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့  … အကြိတ်နယ် ဝေဖန် ဆွေးနွေးလို့ရတာမျိုး မတွေ့ဖူးသေးတာမို့ … ရွာထဲမှာပဲ ပျော်နေခဲ့တာလေ … ။
စာရေးချင်စိတ်ကတော့ … ရွာထဲ ၀င်ခါစကလို မတတ်ကြွတော့ဘူး …
ရွာထဲရောက်ခါစက ပို့စ်တပုဒ် ပွိုင့်သုံးရာ .. အခုတော့ ပို့စ်တစ်ပုဒ် ပွိုင့် 30 ဟီးဟီး … (နောက်တာပါ … ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေ ၊ အားလပ်ချိန်တွေ … အင်တာနက်ဖိုးတွေ ရင်းပြီး .. ၀ါသနာပါရာကို လုပ်နေကြတဲ့ လူတွေ စုဝေးတဲ့ .. ရွာပါ … ပွိုင့်ကြောင့် ၀င်လာတဲ့ လူတွေဆို … တစ်ခါ နှစ်ခါ ၀င်ရေးပြီး ပြန်ကိုလှည့်မလာတော့ဘူးလေ … ။ )
အချိန်တွေ ကို ကြုံဖူးချင်လိုက်တာဗျာ
ဟီးဟီး … အဲ့ဒါ သဂျီးပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ် ကိုပေရေ .. ဒေါ်လာဈေးတွေ တအိအိနဲ့ ကျသွားပြီးပြန်မတတ်တော့သလို … သဂျီးရဲ့ ပွိုင့် လည်း တအိအိနဲ့ ကျသွားပြီး ပြန်မတတ်တော့ဘူး ဟီးဟီး ..
ကိုယ်ဝါသနာပါတာလေးကို တင်ပြခွင့်နေရာလေးတစ်ခုရှိနေတာကို က ၀မ်းသာစရာပါ။
တကယ်လို့များ အင်တာနက်မှာ မြန်မာလိုစာရေးလို့မရဘူးဆိုရင်
ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့ ၀င်ရေုးလို့ရ ဓါတ်ပုံတွေတင်လို့ရတဲ့ ဆိုက်ကလေးတွေများသာ
ကျနော် ကိုပေါက်(မန္တလေး)ရဲ့ အတွေးပါးပါးလေးတွေရော၊စနက်ရှော့ဟုတ်တဲ့လက်ဆော့လေးတွေကို
တင်ပြခွင့်ရနိုင်မှာမဟုတ်သလို ကိုပေါက်(မန္တလေး)ဆိုတဲ့ စာရေးသူတစ်ယောက်လဲ ဖြစ်တည်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့ အသေအချာပါဘဲ။
ဒီလို ဆိုက်လေးတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျနော်လက်ရာလေးတွေကို ဂျာနယ်မှာ ပုံနှိပ်စာလုံးနဲ့ပြန်မြင်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။
တင်ခွင့်ပေးသူရော ဖတ်သူတွေကိုရော ပေါ့။
ကျမတို့လို စာပေကို လက်တည့်စမ်း ရေးချင်သူတွေအတွက်တော့ ဂေဇက်ဟာ အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ရေး ကွင်းကြီး ပါပဲ။ အဲဒီ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ လက်စမ်းရင်း၊ လက်သွေးရင်း ပျော်မွေ့နေရတာပေ့ါ။
အဲသည့်တော့ ဒီ Training ကွင်းကြီး အမြဲတမ်းအောင်မြင်ပါစေ၊ တည်တံ့နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ….
ကိုသစ်ရေ ဒီနေ့အားနေတုန်း ပို့စ်အဟောင်းတွေရှာဖတ်ရင်း
အချိန်လေးရရင် စာရေးပါဦးနော် …